दराजमा भेटिएकाे भिडियो क्यासेट खुल्दुली लागेपछि खोलेर हेर्दा आफ्नै बाउआमाकाे यस्तो…. हे भगवान! देख्नेलाइ नै लाज! – PathivaraOnline
Home > रोचक > दराजमा भेटिएकाे भिडियो क्यासेट खुल्दुली लागेपछि खोलेर हेर्दा आफ्नै बाउआमाकाे यस्तो…. हे भगवान! देख्नेलाइ नै लाज!
admin January 31, 2019 January 31, 2019 रोचक 0
अष्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्ने एक महिलाले दिएको बयानले धेरैलाई चकित बनाएको छ । आफू १५ वर्षको हुँदा घटेको एक घटनाको बारेमा नाम नखुलाइएकी महिलाले ममामिया नाम गरेको वेबसाइटलाई अजिव अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् । घटना ९० को दशकको रहेको छ । १५ वर्षको हुँदा उनी एक दिन माता–पिताको दराज खोतल्दै गर्दा उनले एक पुरानो भिडियो क्यासेट फेला पारेकी थिइन्। धेरै सुरक्षित गरी लुकाइएको त्यस भिडियो क्यासेट देखेर उनलाई खुल्दुली हुन थाल्यो।
त्यसरी लुकाइएको भिडियो क्यासेटमा के छ होला ? भन्ने उनको मनमा प्रश्न उठिरह्यो। उनी भन्छिन्, त्यसरी दराजमा लुकाइएको भिडियो क्यासेट फेला पार्दा मलाई धेरै खुल्दुली भयो। मैले तुरुन्तै भिडियो हेर्ने फैसला गरें। जब मैले भिडियो हेरें तब मलाई धेरै पश्चताप महसुस भयो । मैले किन यसो गरें भन्दै आफैंलाई मैले धिक्कारेको थिए ।
उनले पश्चताप मान्नु पछाडी जुन कारण रहेको छ त्यसले जो–कोहिलाई पनि चकित बनाउन सक्छ । वास्तवमा उनले हेरेको भिडियो क्यासेटमा उनको आफ्नै माता–पिताको सेक्स टेप थियो।
शारीरिक सम्बन्ध राख्दै गर्दा उनका माता–पिताले भिडियो बनाएर भिडियो क्यासेटमा राखेका थिए। त्यही भिडियो उनले हेरेकी थिइन्। वर्षौ पछि पनि उनी त्यस घटनालाई सम्झिएर पश्चताप मान्ने गर्छिन्। उनी भन्छिन्, भिडियोमा त्यस्तो दृश्य देख्ने बितिकै मैले भिडियो बन्द गरिदिएको थिए। त्यो घटना सम्झिँदा मलाई अहिले पनि हाँसो उठ्छ। एजेन्सी
वेहुली लिएर मोटरसाइकलमा जाँदै थिए बेहुला, प्रहरीले रोकेर उल्टै माला लगाएर सगुन स्वरुप पैसा दिएपछि परे छक्क (भिडियो हेर्नुस्)